Celebrity – Page 477 – The News Post
Stay Home ကာ လ မှ မိသားစု ကို အ ချိန်ေ ပး ရင်းပျော်ရွှင်နေ တဲ့ အာဇာနည်
ပရိသတ်ကြီးရေ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် အာဇာနည်ကတော့ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ ဖစ်ဖစ်တုန်နဲ့ ချစ်ချစ်တုန် ဆိုတဲ့ သားလေး နှစ်ယောက်နဲ့ မစ်မစ် တုန် ဆို တဲ့ သမီ …
September 20, 2020 By thu han soe Celebrity
ဒီနေ့ မှာ ပဲ အ သက် (၂၁) နှစ်ပြ ည့် သွား ခဲ့ပြီဖြစ် တဲ့ Myanmar Idol ပြို င် ပွဲ ဝင်ေ ဟာင်း ချမ်းမြေ့မောင်ချို
ပြီးခဲ့တဲ့ Myanmar Idol Season (4) ဟာ အရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှု ခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အားလုံးဟာ ကိုယ်စီမှာရှိကြတဲ့ အသံစွမ်းရည်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်ပြကြရတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း တခဲန က်အားပေးကြပါ တယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ …
ဆွဲဆောင် မှု ရှိ ရှိ ညို့အားပြင်း တဲ့ အ မိုက် စား Body ကို ချပြ လိုက် တဲ့ မင်းသမီး နေခြည်ရွှန်းလက်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. MRTV-4 မင်းသမီးချောလေးဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ရွှန်းလက် ကိုတော့ အား လုံးပဲ အချစ် ပိုေ နကြ မှာပါနော်..။ နေခြည်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော်လေး သူမကတော့ ချောမောလှပတဲ့အပြင် …
အ ခါ ခါပြန် ကြည့် ချင်ေ လာက်ေ အာင် လှရက် လွန်းနေ တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း (ဗီ ဒီ ယို ဖိုင်)
ကြွေရုပ်လေးလား ထင်မှားလောက်တဲ့ သူမရဲ့ ချစ်စရာဟန်ပန်လေးတွေကြောင့် မိန်ကလေး အများစု အားကျနှစ်သက်နေတာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့် ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နွယ်ဒါလီထွန်းလည်း ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ …
ဘယ်ေ လာက် စား စား ဝမလာ ရ တဲ့ သူ မ ရဲ့ လျှို့ ဝှက် ချက် ကို အေးမြတ်သူ ပြော ပ လိုက် ပြီ
“မမြတ်လေး ….. အများကြီးေ တွစားပြီး …………မဝတာ ….ဘာကြောင့် လဲ????????အဖြေကတော့……အမျိုးသား…/အမျိုးသမီး…တိုင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားတစ်ခုခုတော့ လုပ် ရ‌‌တော့ မယ့်…..ခေတ်ကာလအနေအထားကြီးဖြစ်နေပြီ ……ချစ်ရသူ တို့ရေ……နေထိုင် မှုပုံစံအသစ် မှာ…အာဟာရရှိတာတွေ စားသောက်ပြီး…. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိ ဖို့လိုအပ်နေပြီရှင့်…….အားလုံး…အားလုံး … …
မြေး မလေးကေ သရာနဲ့ကျ မှ ပဲ ဆံညှပ်ေ တွအ မျိုးမျိုးနဲ့ ပြု သ မျှနုေ န ရတဲ့ ROCKER ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့အြ ဖစ်
မြေးမလေးကေသရာနဲ့ကျမှ ဆံညှပ်ေ တွအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုသမျှနုနေရတဲ့ Rocker ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့အဖြစ် နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ ပရိသတ်ေ တွအကြိုက် Rock သီချင်းတွေကို သီဆိုရင်း ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သီချင်းတွေက …
ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင် မှာ ရှိတဲ့ QUARANTINE အေ ဆာင် မှာ အသ င့်စား ဝက် အူချော င်းတွေ လှူ ဖို့ ကိုယ်တိုင်ပြ င်ဆင်နေ
ရန်ကုန်မြို့၊လှိုင်မှာရှိတဲ့ Quarantineအဆောင်မှာ အသင့်စားဝက် အူချောင်းတွေ လှူဖို့ကိုယ် တိုင်ပြင် ဆင်နေတဲ့ စီနွန် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အလှူအတန်းဆိုလည်းရက်ရောပြီးမကြာခဏဆိုသလိုအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စီနွန်ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တတ်နိုင် သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလု ပ်လျက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ …
စတိုင် အပြည့် ထုတ်ပြီး အမိုက်စား ပို့ စ်တွေပေးကာ ဖေဖေေ တာင် အ ရှုံးပေးသွားရေ လာက် တဲ့ ဂျူနီယာမြင့်မြတ်လေး
မြင့်မြတ်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကတော့ သဘာဝကျတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်နေတဲ့ အနု ပ ညာရှ င်တစ်ေ ယာက်ပဲ ဖြစ် …
” ချစ်သူက ပို့ပေး လိုက် တဲ့ ထူးခြား တဲ့ေ မွးနေ့ ကိတ်လေးကို သေ ဘာ ကျ မဆုံးဖြစ် ​နေ တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”
ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လို နုပျိုလှပနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲနော်။အနုပညာ​လောကမှာလည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာ ထဲကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီး တစ်လက် လည်းဖြ စ်ပါတ ယ်။ နန်းဆုကတော့ အသားအရေအရမ်းကို လှပတဲ့ ရှမ်းတရုတ်ကပြားမလေးတစ်ယောက်ပါနော်။အခုနောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေထက် သီချင်းအသစ် Music Video …
September 19, 2020 By thu han soe Celebrity
အသက် ရှူရ ခက်ပြီးအောက် စီ ဂျင် လိုနေ တဲ့ သူေ တွ အတွက် အောက်စီဂျင်စက် (၁၀) လုံး လှူ ဒါန်း လိုက် တဲ့ စမိုင်းလ်
တစ်ခေတ် တစ်ခါက ပရိသတ် အချစ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော စမိုင်းလ်ကတော့ လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်တော့ပေမယ့် အလှူအတန်းတွေလုပ်ရင့်း ပရိသတ် အချစ်တွေ ရရှိပိုင်ထား သူ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ …
Page 1 … Page 476 Page 477 Page 478 … Page 563